Benjamin Franklin ၏ အစီအစဉ်ဖြင့် တစ်ရက်တာနေထိုင်ခြင်း – Gentleman Magazine
Benjamin Franklin ၏ အစီအစဉျဖွငျ့ တဈရကျတာနထေိုငျခွငျး
တစ်နေ့တာလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို မှတ်သားထားနိုင်တဲ့ application တွေမပေါ်ခင်က အောင်မြင်မှုအတွက် နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကို Benjamin Franklin က ဖော်ထုတ်ပြသခဲ့ဖူးပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း (၂၀၀)ကျော်လောက်က အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို စတင်တည်ထောင်သူ Benjamin Franklin ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ တစ်နေ့တာအစီအစဉ်က အခုခေတ်မှာ အလုပ်ဖြစ်နိုင်သေးရဲ့လားဆိုတာကို စမ်းသပ်ကြည့်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီအတွက် ၁၇၉၁ ခုနှစ်တုန်းက Benjamin Franklin ကိုယ်တိုင်ရေးသားခဲ့တဲ့ ကိုယ်ရေးအထုပတ္တိထဲက နေ့စဉ်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကို တစ်ရက်တာ လိုက်နာကျင့်သုံးကြည့်ခဲ့ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ အစီအစဉ်ကတော့ –
5 AM – 8 AM : The Morning Question
ဒီနေ့အတွက် ကောင်းကျိုးရှိတာ ဘာလုပ်မလဲ ?
အိပ်ရာကထ၊ မျက်နှာသစ်၊ ရေချိုး၊ ကောင်းချီးပေး၊ တစ်နေ့တာလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ ပြင်ဆင်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချမှတ်၊ လက်ရှိလေ့လာနေတဲ့အရာကို ဆက်လေ့လာပြီးရင် မနက်စာစားဖို့ ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Benjamin Franklin ရဲ့အစီအစဉ်ကို လိုက်လုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ မနက်(၅)နာရီ အိပ်ရာကထနေကျ မဟုတ်ရင် အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျန်တဲ့တစ်မနက်ခင်းလုံးမှာ ကပျာကယာ ဖြစ်စရာမလိုတဲ့အတွက် အဆင်ပြေချောမွေ့နေတာကို တွေ့ရမှာပါ။ သွားတိုက်ဖို့ မျက်နှာသစ်ဖို့ အချိန်ပိုရသလို ၀တ်စုံကိုလည်း စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်နေ့တာလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ ပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့ တစ်နေ့တာအတွက် ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေ ချမှတ်ပြီး အကောင်အထည်ပေါ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကို စီစဉ်ပါတယ်။ အလုပ်နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ တစ်နေ့စာ ရည်မှန်းချက် (၄)ခုနဲ့ ဘ၀တိုးတက်ရေးအတွက် (၃)ခု ချမှတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ အရင်တုန်းက မတွေးမိခဲ့တဲ့ ဘုရားသခင်၊ ကံတရား၊ လောကကြီးအကြောင်းတွေကို စဉ်းစားသုံးသပ်ချိန်ရပါတယ်။ ဘာသာတရားအတွက် အလုပ်လုပ်ဖို့ သိလာတာကို ဆိုလိုချင်တာပါ။
8 AM – 12 PM : Work
အလုပ်ကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ မနက်ခင်းမှာ ချမှတ်ထားတဲ့ တစ်နေ့စာ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေကို ချရေးပြီး အလုပ်စားပွဲမှာ ကပ်ထားလိုက်ပါတယ်။ ဒီရည်မှန်းချက်တွေကို စိတ်ထဲမှာ ထည့်ထားပြီး လုပ်တဲ့အခါမှာ လုပ်စရာရှိတာတွေကို အာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်းအပြည့်နဲ့ လုပ်နိုင်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ မနက် (၅)နာရီထခဲ့ရတဲ့အတွက် အကျင့်မရှိသေးရင် နည်းနည်းတော့ ပင်ပန်းပါလိမ့်မယ်။
12PM –2PM : Read or overlook my accounts and dine
နေ့လည် ၁၂ နာရီကနေ ၂ နာရီအထိကတော့ နေ့လည်စာစားချိန်၊ စာဖတ်ချိန် ဒါမှမဟုတ် စာရင်းတွေစစ်ဆေးရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
Benjamin Franklin က အောင်မြင်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးစရာ စာရင်းအင်းတွေ အများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်။ သူ့အစီအစဉ်အတိုင်း ကျင့်သုံးကြည့်တဲ့အနေနဲ့ ကျွန်တော်အတွက် စစ်ဆေးစရာရှိတဲ့ စာရင်းအင်းတွေကို ဒီအချိန်မှာ စစ်ဆေးသလို ယနေ့ခေတ်ရဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေဖြစ်တဲ့ Twitter, Facebook, Instagram နဲ့ Youtube အကောင့်တွေကိုလည်း စစ်ဆေးကြည့်ရှုပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ရင်း မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေရဲ့ မွေးနေ့အတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးတာ၊ tweet လုပ်တာ၊ Like ပေးသင့်တာတွေကို ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုတွေ လုပ်ဆောင်လိုက်ရတဲ့အတွက် တကယ်ကို ကျေနပ်မှုကို ခံစားလိုက်ရပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ နေ့လည်စာ စားလိုက်ပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်ရဲ့ အကောင်းဆုံးအပိုင်းက ရတဲ့အချိန်အတွင်းမှာ စာဖတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ စာဖတ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် ဦးနှောက်ကို စွမ်းအင်ပြန်ပြီး ပြည့်သွားစေပါတယ်။
2 PM –5PM : Work
Benjamin Franklin ရဲ့ အစီအစဉ်တိုင်းဆိုရင် ညနေ (၅)နာရီမှာ အလုပ်ပြီးရမှာဖြစ်ပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ အစည်းအဝေးတစ်ခုရှိတဲ့အတွက် (၆)နာရီမှ ပြီးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Benjamin Franklin ဆိုရင်လည်း အရေးကြီးကိစ္စရှိရင် အစီအစဉ်ကို ပြောင်းလဲနိုင်တယ်လို့ တွေးပြီး ဖြေသိမ့်လိုက်ပါတယ်။ အလုပ်ကနေပြန်လာတဲ့အချိန်မှာ မနက်က ချမှတ်ထားတဲ့ ရည်မှန်းချက်(၄)ခုထဲက (၃)ခု ပြီးအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
5 PM – 10 PM : Evening question
ဒီနေ့အတွက် ကောင်းကျိုးရှိတာ ဘာလုပ်ခဲ့လဲ?
ပစ္စည်းတွေ နေရာတကျပြန်ထား၊ ညစာစား၊ တေးဂီတာနားထောင်၊ စကားစမြည်ပြော၊ တစ်နေ့စာအတွက် ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Benjamin Franklin ရဲ့ အစီအစဉ်ကို မလိုက်နာရင်လည်း လူတိုင်း အိမ်ကိုပြန်ရောက်တာနဲ့ သန့်ရှင်းသွားအောင် ရေမိုးချိုး၊ ညစာစား ပြီး အနားယူတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Benjamin ရဲ့ အစီအစဉ်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ တစ်နေ့စာအတွက် ပြန်လည်သုံးသပ်တာကတော့ အရေးကြီးပါတယ်။ မနက်ခင်းပိုင်းမှာ ချမှတ်ခဲ့ပြီး အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့တဲ့ ရည်မှန်းချက် (၃)ခုနဲ့ မဖော်နိုင်ခဲ့တဲ့ (၁)ခုအကြောင်းကို ပြန်တွေးပြီး မနက်ဖြန်အတွက် ရည်မှန်းချက်အသစ်တွေနဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ချရေးထားလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ တစ်နေ့တာလုံးမှာ လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ အကျိုးရှိတဲ့အရာတွေကို ပြန်လည်သုံးသပ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုဆင်ခြင်သုံးသပ်တာက ကျွန်တော်ကို နောက်ထပ်တစ်ရက်ဆက်လက်ရှင်သန်နေချင်အောင် တွန်းအားပေး နိုင်ပါတယ်။
Benjamin Franklin ရဲ့ တစ်နေ့တာအစီအစဉ်အတိုင်း လိုက်နာနေထိုင်ကြည့်တဲ့အခါမှာ လက်ရှိဘ၀နေထိုင်မှုနဲ့ တူညီမှုတွေရော ကွဲပြားမှုတွေကိုပဲ တွေ့ရပါတယ်။ တူညီမှုကတော့ သူကလည်း ယနေ့ခေတ်မှာရှိတဲ့ လူတွေလိုပဲ တစ်နေ့တာရဲ့အချိန်အများစုကို အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ ကုန်ဆုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ မတူတာကတော့ သူ့ရဲ့တစ်နေ့တာကို ရည်မှန်းချက်တွေနဲ့ ဖြတ်သန်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Benjamin Franklin ရဲ့ တစ်နေ့တာအစီအစဉ်ကနေမှတဆင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အချိန်တွေကို ဘယ်လိုသုံးနေလဲ၊ ဘာကြောင့်၊ ဘာအတွက် သုံးနေရသလဲဆိုတာကို သိလာခဲ့ရပါတယ်။
တဈနတေ့ာလုပျငနျးဆောငျတာတှကေို မှတျသားထားနိုငျတဲ့ application တှမေပျေါခငျက အောငျမွငျမှုအတှကျ နစေ့ဉျလုပျဆောငျသငျ့တဲ့အစီအစဉျတဈခုကို Benjamin Franklin က ဖျောထုတျပွသခဲ့ဖူးပါတယျ။ လှနျခဲ့တဲ့နှဈပေါငျး (၂၀၀)ကြျောလောကျက အမရေိကနျပွညျထောငျစုကို စတငျတညျထောငျသူ Benjamin Franklin ရေးဆှဲခဲ့တဲ့ တဈနတေ့ာအစီအစဉျက အခုခတျေမှာ အလုပျဖွဈနိုငျသေးရဲ့လားဆိုတာကို စမျးသပျကွညျ့ဖို့ လိုပါတယျ။ ဒီအတှကျ ၁၇၉၁ ခုနှဈတုနျးက Benjamin Franklin ကိုယျတိုငျရေးသားခဲ့တဲ့ ကိုယျရေးအထုပတ်တိထဲက နစေ့ဉျလုပျငနျးအစီအစဉျကို တဈရကျတာ လိုကျနာကငျြ့သုံးကွညျ့ခဲ့ပါတယျ။
သူ့ရဲ့ အစီအစဉျကတော့ –
ဒီနအေ့တှကျ ကောငျးကြိုးရှိတာ ဘာလုပျမလဲ ?
အိပျရာကထ၊ မကျြနှာသဈ၊ ရခြေိုး၊ ကောငျးခြီးပေး၊ တဈနတေ့ာလုပျငနျးဆောငျတာတှေ ပွငျဆငျပွီး ဆုံးဖွတျခကျြတှေ ခမြှတျ၊ လကျရှိလလေ့ာနတေဲ့အရာကို ဆကျလလေ့ာပွီးရငျ မနကျစာစားဖို့ ပဲဖွဈပါတယျ။
Benjamin Franklin ရဲ့အစီအစဉျကို လိုကျလုပျကွညျ့တဲ့အခါမှာတော့ မနကျ(၅)နာရီ အိပျရာကထနကြေ မဟုတျရငျ အဆငျပွမှောမဟုတျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ကနျြတဲ့တဈမနကျခငျးလုံးမှာ ကပြာကယာ ဖွဈစရာမလိုတဲ့အတှကျ အဆငျပွခြေောမှနေ့တောကို တှရေ့မှာပါ။ သှားတိုကျဖို့ မကျြနှာသဈဖို့ အခြိနျပိုရသလို ဝတျစုံကိုလညျး စိတျကွိုကျရှေးခယျြနိုငျပါတယျ။ တဈနတေ့ာလုပျငနျးဆောငျတာတှေ ပွငျဆငျတဲ့အနနေဲ့ တဈနတေ့ာအတှကျ ရညျမှနျးခကျြပနျးတိုငျတှေ ခမြှတျပွီး အကောငျအထညျပျေါအောငျ ဘယျလိုလုပျမလဲဆိုတာကို စီစဉျပါတယျ။ အလုပျနဲ့ပတျသတျတဲ့ တဈနစေ့ာ ရညျမှနျးခကျြ (၄)ခုနဲ့ ဘဝတိုးတကျရေးအတှကျ (၃)ခု ခမြှတျနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ပွီးရငျတော့ အရငျတုနျးက မတှေးမိခဲ့တဲ့ ဘုရားသခငျ၊ ကံတရား၊ လောကကွီးအကွောငျးတှကေို စဉျးစားသုံးသပျခြိနျရပါတယျ။ ဘာသာတရားအတှကျ အလုပျလုပျဖို့ သိလာတာကို ဆိုလိုခငျြတာပါ။
အလုပျကိုရောကျပွီဆိုတာနဲ့ မနကျခငျးမှာ ခမြှတျထားတဲ့ တဈနစေ့ာ ရညျမှနျးခကျြပနျးတိုငျတှကေို ခရြေးပွီး အလုပျစားပှဲမှာ ကပျထားလိုကျပါတယျ။ ဒီရညျမှနျးခကျြတှကေို စိတျထဲမှာ ထညျ့ထားပွီး လုပျတဲ့အခါမှာ လုပျစရာရှိတာတှကေို အာရုံစူးစိုကျနိုငျစှမျးအပွညျ့နဲ့ လုပျနိုငျတာကို တှရေ့ပါတယျ။ မနကျ (၅)နာရီထခဲ့ရတဲ့အတှကျ အကငျြ့မရှိသေးရငျ နညျးနညျးတော့ ပငျပနျးပါလိမျ့မယျ။
နလေ့ညျ ၁၂ နာရီကနေ ၂ နာရီအထိကတော့ နလေ့ညျစာစားခြိနျ၊ စာဖတျခြိနျ ဒါမှမဟုတျ စာရငျးတှစေဈဆေးရတဲ့အခြိနျဖွဈပါတယျ။
Benjamin Franklin က အောငျမွငျတဲ့ စီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျတဈယောကျဖွဈတဲ့အတှကျ ကွညျ့ရှုစဈဆေးစရာ စာရငျးအငျးတှေ အမြားကွီးရှိနိုငျပါတယျ။ သူ့အစီအစဉျအတိုငျး ကငျြ့သုံးကွညျ့တဲ့အနနေဲ့ ကြှနျတျောအတှကျ စဈဆေးစရာရှိတဲ့ စာရငျးအငျးတှကေို ဒီအခြိနျမှာ စဈဆေးသလို ယနခေ့တျေရဲ့ ဆိုရှယျမီဒီယာတှဖွေဈတဲ့ Twitter, Facebook, Instagram နဲ့ Youtube အကောငျ့တှကေိုလညျး စဈဆေးကွညျ့ရှုပါတယျ။ ဒီလိုလုပျရငျး မိတျဆှအေပေါငျးအသငျးတှရေဲ့ မှေးနအေ့တှကျ မှေးနဆေု့တောငျးပေးတာ၊ tweet လုပျတာ၊ Like ပေးသငျ့တာတှကေို ပေးလိုကျပါတယျ။ ဒီလိုတှေ လုပျဆောငျလိုကျရတဲ့အတှကျ တကယျကို ကနြေပျမှုကို ခံစားလိုကျရပါတယျ။ ပွီးရငျတော့ နလေ့ညျစာ စားလိုကျပါတယျ။ ဒီအစီအစဉျရဲ့ အကောငျးဆုံးအပိုငျးက ရတဲ့အခြိနျအတှငျးမှာ စာဖတျတာပဲဖွဈပါတယျ။ စာဖတျလိုကျခွငျးအားဖွငျ့ ဦးနှောကျကို စှမျးအငျပွနျပွီး ပွညျ့သှားစပေါတယျ။
Benjamin Franklin ရဲ့ အစီအစဉျတိုငျးဆိုရငျ ညနေ (၅)နာရီမှာ အလုပျပွီးရမှာဖွဈပမေယျ့ ကြှနျတျောကတော့ အစညျးအဝေးတဈခုရှိတဲ့အတှကျ (၆)နာရီမှ ပွီးခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ Benjamin Franklin ဆိုရငျလညျး အရေးကွီးကိစ်စရှိရငျ အစီအစဉျကို ပွောငျးလဲနိုငျတယျလို့ တှေးပွီး ဖွသေိမျ့လိုကျပါတယျ။ အလုပျကနပွေနျလာတဲ့အခြိနျမှာ မနကျက ခမြှတျထားတဲ့ ရညျမှနျးခကျြ(၄)ခုထဲက (၃)ခု ပွီးအောငျလုပျနိုငျခဲ့ပါတယျ။
ဒီနအေ့တှကျ ကောငျးကြိုးရှိတာ ဘာလုပျခဲ့လဲ?
ပစ်စညျးတှေ နရောတကပြွနျထား၊ ညစာစား၊ တေးဂီတာနားထောငျ၊ စကားစမွညျပွော၊ တဈနစေ့ာအတှကျ ပွနျလညျသုံးသပျဖို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။
Benjamin Franklin ရဲ့ အစီအစဉျကို မလိုကျနာရငျလညျး လူတိုငျး အိမျကိုပွနျရောကျတာနဲ့ သနျ့ရှငျးသှားအောငျ ရမေိုးခြိုး၊ ညစာစား ပွီး အနားယူတတျကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ Benjamin ရဲ့ အစီအစဉျမှာ ဖျောပွထားတဲ့ တဈနစေ့ာအတှကျ ပွနျလညျသုံးသပျတာကတော့ အရေးကွီးပါတယျ။ မနကျခငျးပိုငျးမှာ ခမြှတျခဲ့ပွီး အကောငျအထညျဖျောနိုငျခဲ့တဲ့ ရညျမှနျးခကျြ (၃)ခုနဲ့ မဖျောနိုငျခဲ့တဲ့ (၁)ခုအကွောငျးကို ပွနျတှေးပွီး မနကျဖွနျအတှကျ ရညျမှနျးခကျြအသဈတှနေဲ့ လုပျဆောငျခကျြတှကေို ခရြေးထားလိုကျပါတယျ။ ပွီးတော့ တဈနတေ့ာလုံးမှာ လုပျဆောငျခဲ့တဲ့ အကြိုးရှိတဲ့အရာတှကေို ပွနျလညျသုံးသပျလိုကျပါတယျ။ ဒီလိုဆငျခွငျသုံးသပျတာက ကြှနျတျောကို နောကျထပျတဈရကျဆကျလကျရှငျသနျနခေငျြအောငျ တှနျးအားပေး နိုငျပါတယျ။
Benjamin Franklin ရဲ့ တဈနတေ့ာအစီအစဉျအတိုငျး လိုကျနာနထေိုငျကွညျ့တဲ့အခါမှာ လကျရှိဘ၀နထေိုငျမှုနဲ့ တူညီမှုတှရေော ကှဲပွားမှုတှကေိုပဲ တှရေ့ပါတယျ။ တူညီမှုကတော့ သူကလညျး ယနခေ့တျေမှာရှိတဲ့ လူတှလေိုပဲ တဈနတေ့ာရဲ့အခြိနျအမြားစုကို အလုပျလုပျရငျးနဲ့ ကုနျဆုံးနတောဖွဈပါတယျ။ မတူတာကတော့ သူ့ရဲ့တဈနတေ့ာကို ရညျမှနျးခကျြတှနေဲ့ ဖွတျသနျးနတောပဲဖွဈပါတယျ။ Benjamin Franklin ရဲ့ တဈနတေ့ာအစီအစဉျကနမှေတဆငျ့ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ အခြိနျတှကေို ဘယျလိုသုံးနလေဲ၊ ဘာကွောငျ့၊ ဘာအတှကျ သုံးနရေသလဲဆိုတာကို သိလာခဲ့ရပါတယျ။
Previous: ထူးချွန်ထက်မြက်သူတို့၏ အမူအကျင့်များ
Next: မိန်းကလေးတွေ ပြောကြတဲ့ ယောက်ျားမပီသစေတဲ့ အရာ ၂၀ ခု